Nirotahan’ny mpijery ny “Kopi Kolé” an’Black Nadia | NewsMada
Nirotahan’ny mpijery ny “Kopi Kolé” an’Black Nadia
Matetika hitrangana olana mihitsy i Black Nadia… Nisy tranga nahakasika ity mpanakanto ity sy ny “Kopi Kolé”-ny indray mantsy ny asabotsy teo. Araka ny vaovao avy amin’ny zandary any an-toerana, tokony hanao fampisehoana tao amin’ny tanànan’Ikianja, kaominina Sahasinaka, any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, i Black Nadia, ny asabotsy lasa teo.
Tonga maro ny mpijery satria mahalana no hahitan’izy ireo mpanakanto malaza toa izany, any aminy. Nanomboka niakatra ny feo sy ny hatezerana, rehefa tara vao nanomboka ny fampisehoana. Nipoaka tanteraka kosa izany, rehefa fantatry ny mpijery fa ny “Kopi Kolé” no tonga tao fa tsy i Black Nadia…
Nisy ireo nentin-katezerana ka tafakatra ny sehatra, nandravarava ny fitaovana ary nitora-bato. Raha tsy teo ireo zandary, saika ratsy ny nanjo ilay mpanakanto. Araka ny vaovao nampitain’ny zandary, nambenana mihitsy ny maraina vao afaka niala an’i Sahasinaka tamina fiara 4×4 ilay “Kopi Kolé”.
Mazava ho azy fa voatondro ho tompon’antoka voalohany amin’ny tranga toa izao ny mpikarakara. Mety mahakasika ilay mpanakanto ihany koa anefa izany, raha toa ka tena nanao sonia ny fifanarahana marina izy, ka mahalala tsara ny fisian’ny fampisehoana tokony hotontosainy.
Fantatra fa nanatontosa “cabaret” niaraka tamin’ilay mpanakanto afrikanina J Love i Black Nadia, ny alin’ny zoma lasa teo, tetsy amin’ny Le Glacier Analakely. Nanambara ny mpiara-miasa aminy fa manohy ny fitetezam-paritra avy hatrany ity mpanakanto ity, ny ampitson’io ihany. Tsy voafaritra mazava kosa raha tokony hihazo an’i Sahasinaka izy tamin’io, satria tsy nisy azo an-telefaonina na izy na ny mpiara-miasa aminy, hatramin’ny ora farany nanoratanay.